Unqobe izinselelo onikwe esokuphatha ophikweni i-ATNS | Isolezwe
Unqobe izinselelo onikwe esokuphatha ophikweni i-ATNS
intandokazi / 14 February 2019, 4:43pm / PHILI MJOLI
UNKSZ Lulekwa Ngcwabe osanda kuqokelwa esikhundleni sokuphatha, ophikweni olulawula ukuhamba kwamabhanoyi emoyeni, i-Air Traffic and Navigation Services Isithombe: SITHUNYELWE
WANGENA engaqondile kwandabazabantu owesifazane okuthe ngeledlule waqokelwa esikhundleni sokuphatha ophikweni lwakwandabazabantu olulawula ukundiza kwamabhanoyi i-Air Traffic and Navigation Services (ATNS).
UNksz Luleka Ngcwabe uyisikhulu esiphezulu ophikweni lwakwandabazabantu, iHuman Resources Executive.
UNksz Ngcwabe (42) uthe wayengakaze akucabange ukuthi athathe umkhakha wakwandabazabantu ngoba wayezifela ngokuba usoKhemisi noma iChemical Engineer.
“Ngangithi uma ngicabanga ngokusebenza e-laboratory, ngicwaninge noma ngihlanganisa okuthile ngizwe inhliziyo yami ilangazelela ukwenza lo msebenzi futhi ngibona ukuthi uma ngingenza wona ngiyobe ngenza into engiyithandayo kodwa akwenzekanga kanjalo, ngagcina ngifunde i-Economics and Public Administration. Ngesikhathi ngithola umsebenzi wami wokuqala bangifaka ehhovisi lakwandabazabantu, ngakuthanda ukusebenza khona, ngaqhubeka nokuzicija kulo mkhakha,” kusho yena.
Lentokazi ezalelwe eNgcobo, e-Eastern Cape, ineminyaka engaphezulu kweyishumi isebenza kulo mkhakha.
Njengoba isisebenza e-ATNS ibikade iyibambe ishisa emkhandlwini iJohannesburg, ophikweni lwamabhasi iMetrobus Entity iyimenenja. Ngaphambi kwalokho ubesebenza kwiRoad Traffic Infringement Agency (RTIA) lapho kubonakale khona amagalelo akhe ngesikhathi esungula uphiko lokuphatha lwakwandabazabantu.
Uke waba sesikhundleni sokuphatha kwa-Eskom, nasophikweni lwezokushusisa, iNational Prosecuting Authority (NPA), e-Eastern Cape Parks Board naseMnyangweni wezeMidlalo, ubuCiko namaSiko kuso lesi sifundazwe.
UNksz Ngcwabe uneBachelor of Administration ayithole eWalter Sisulu University, iMasters in Business Administration (MBA), iDegree neDiploma yeDoctoral Studies ayithole eGordon Institute of Business Science (GIBS) namanye amakhono akhona akwandabazabantu nawezokuphatha okubalwa kuwo iStrategic HR Leadership Programme ayenze eStellenbosch University Business School, iProgramme in Business Leadership ayithole e-Unisa School of Business Leadership neGlobal Executive Development Programme ayithole eGIBS. Uyilungu lekomiti leGauteng Gambling Board.
Ephawula ngokuqokwa kwakhe kulesi sikhundla uthe: “Ngijabule kakhulu ukusebenzela lolu phiko oludume ngokwenza kahle umsebenzi eliwubekelwe. Nginethemba lokuthi nami ngizokwenza umsebenzi oncomekayo. Ngizobe ngisebenza nethimba ophikweni, iHuman Capital senze isiqiniseko sokuthi i-ATNS yenza konke ebekelwe kona ukuthuthukisa nokuphatha kahle abasebenzi,” kusho yena.
Le ntokazi ithe ibe nenhlanhla yokusebenza nabantu abebeyeseka ngesikhathi isesezigabeni eziphansi kulo msebenzi.
“Zikhona izinselelo engike ngahlangabezana nazo ngesikhathi ngisemncane. Kunabantu ebebekuthola kunzima ukwamukela imiyalelo engibatshela yona ngoba bengibona ngimncane kodwa ngaqeqeshwa ngokuthi ngibhekana kanjani nezimo ezinjalo,” kusho yena.